Patreon Omdala Imidlalo: Free Zincwadi Ngaphakathi Gaming
Patreon Omdala Imidlalo: Ukufikelela Apha!
Patreon Omdala Imidlalo yi ngenye indlela eyodwa ingcamango kwi-porn isithuba: sibe uzama ukuthumela abantu elandelayo inqanaba ngesondo enjoyment nolonwabo lwakhe ngu presenting nabo iinketho bathi kusenokwenzeka ukuba zange wayecinga ukuba kunokwenzeka phambi. Khangela, kukho enkulu database phandle phaya devoted ukuba hottest imidlalo ukuba abantu ngokwenene uthando nenkxaso: Patreon., Trouble kukuthi, kuba ezininzi amagama eencwadi, kufuneka ahlawule omkhulu imali imali ukuze afumane ufikelelo, okanye ukuzibophelela kuba qho ngenyanga ufikelele system ukuba kaninzi kwe-hayi kuthatha iminyaka ukuba kwenzeka fruition njengoko phambili yithi rhoqo pushes emva uhlaziyo kwaye ifuna ngaphezulu imali iphelele yintoni baya ukuba bakwenze. E-Patreon Omdala Imidlalo, sibe neyokusebenza egameni lakho ukuze ufumane zonke iinzuzo ze ke Patron, kodwa ngaphandle kufuneka ngokwenene sayina – okanye isandla sakho phezu imali – ngoko ke ukuba uyakwazi nje kugxila yokufumana imidlalo, kwaye akhonto ingenye., Thina anayithathela onayo exclusive uya kufumanisa ukumisela isixhobo kunye eyona amaphawu kwi-ishishini kwaye unako ukufikelela kwabo bonke apha – akukho ebuzwa! Ukufunda ngakumbi, funda phantsi apha ngezantsi kwaye ndizakuyenza qhuba wena ngokusebenzisa indlela Patreon Omdala Imidlalo zilawulwe ukufumana apho sisebenzisa kwaye, ukongeza koko, inkcukacha ukuba yintoni elandelayo kuba zethu kuluntu njani ungakwazi kuba inxalenye yayo yonke. Isandi ngathi isicwangciso, Stan? Ngoko uqhubeke kwelinye!
Free ukufikelela system
Jonga: siyazi ke ivakala ngathi i-absolutely uphambene nto ukuyenza, kodwa Patreon Omdala Imidlalo oninika ukufikelela amagama eencwadi sino ngokupheleleyo simahla. Siyenza njani oku, kanye kanye? Kulungile, kuba siya kuba enkulu inani lamalungu abeza yi-apha kwaye yenza ii-akhawunti, sinako ahlawule ababhekisi phambili a decent bala ngokutshintsha asebenze njengonobhala jonga ngenxa yabo amagama eencwadi. Yesibini ukuba, sizo sose a inani sponsors ukuba ufuna exclusive ukufikelela porn gamers, ngoko ke siya kuyo izibhengezo ecaleni ukuncedisa kunye izisa kwi-big bucks. Yenza ezininzi evakalayo, akunjalo?, Patreon Omdala Imidlalo ngu usikelelwe ukuba kuba decent bankroll ilungelo ngoku kwaye xa siya kuhlawula ngaphandle ngaphezu sifumana, iiprojekthi zexesha elizayo kwaye izimvo sino kwi-wegstreamer kuleminyaka 12 zidlulileyo uza kufumana kwethu kwi-luhlaza ngaphandle kokufuna idini nayiphi na inxenye yayo yonke amava nisolko osetyenziselwa apha. Nakuba kunjalo, nonke nina ngenene kufuneka ukwazi malunga mysterious goings kwi-e-Patreon Omdala Imidlalo yindlela elula yokuba ufumane phezu 50 exclusive Patreon imidlalo ukuze bonwabele ngaphandle ukubhatala kuba nabo. Ukuba u-sweet, akunjalo? Oh, kwaye benceba akuthethi ukuba nje yima phaya – ngoko ke, kokukhona ubukrelekrele ngu esiza indlela yakho!
Enye enkulu iingxaki Patreon amaphawu kukuba baye rhoqo kufuna ukuba ukhuphele nabo kwaye ufake imidlalo ukuba indlela yakho, apho unako ukwenza imiba ukuba imiyalelo aren khange ukuba cima okanye understandable. Patreon Omdala Imidlalo lilawula iilwandle ukuba out le yokuba zilawulwe ngokwenza omnye kakhulu elihle nto: zinika kuwe nako ukuya ozayo kwaye dlala into esinayo yakho nge-zincwadi., I-central premise apha kukuba nifanele ukuba ukwazi ukuba bonwabele imidlalo ukuba Patreon ababhekisi phambili kuba ngaphandle kokusebenza umngcipheko ekubeni i-virus kwindlela yakho okanye, kungenjalo, kokufuna ukulinda ixesha elide kuba bonke ukufumana layishela phantsi egronjiweyo ukuze qala. Ngenxa yokuba thina unkcenkceshelo kudla data yakho yokusebenza njengoko usenza inkqubela-phambili nge-umdlalo, impahla yexabiso ukufaka njengoko kwaye xa kufuneka, okuthetha ukuba unxulumano lwakho ayi elikhulu, uza ngxi kukwazi ukufumana waqala ngomhla we-umdlalo ngaphandle ndinovelwano ngathi kufuneka ukuchitha yure okanye u-qwalasela oko., Oku kanjalo okulungileyo ukuba uziva ngathi umdlalo abe kulungile, kodwa musa ufuna hlasi ingxowa-10 GB ifayile ukuze ukufumana phandle. Patreon Omdala Imidlalo oninika ukhetho kwaye nako ukudlala kuba 5 imizuzu engama-ngqo ngaphandle i-bat kwaye ukuba wena musa njenge into esinayo, ngokulula ukungena ngaphandle – akukho ngokwasemalini, akukho foul. Oku kuthetha kanjalo ukuba gamers apha bayakwazi ukuxhulumana kwi Ubuyo kwaye Linux iindlela: ngoko ke, ixesha elide njengoko nisolko uyasebenza Safari, i-Firefox okanye ye-chrome, nisolko okulungileyo khona.
Enye inzuzo Patreon Omdala Imidlalo kukuba xa entsha iintelekiso roll jikelele, nisolko ezingayi kufuneka fuck ngokwakho phezu nge ekubeni ukuya kwelandelayo kwabo – okanye khangela ukuba babe izinto ezifunekayo ukuze ube layishela phantsi egronjiweyo kwindawo yokuqala. Thina zikhathalele zonke ukuba ikhutshwe egameni lakho, kwaye isithembiso tyhala uhlaziyo imidlalo ngaba uthando iiyure ezingama-24 – 7 iintsuku ngeveki! Oku kuqinisekisa ukuba ukhe ubene yokufumana oludlulileyo kwaye elikhulu, ngoko ke sikwi incredibly humbled kwaye pleased ukubona nje njani koko wafumana esi sigqibo kwaye nkqubo wenziwe., Patreon Omdala Imidlalo ayinakuze bazive ngathi siphinda-falling kwi-hard umphinda-phinde ngo ngoko ke ixesha elide njengoko gamers kukho ukuze sibonise ukuba lento siyenzayo sele ixabiso kwaye ndiya kusoloko kuba ukubaluleka kwabo! Oh, kwaye siphinda-constantly ikhangela entsha imidlalo ukuba tyhala nokukhuthaza kakhulu, ngoko ke ukuba ufuna nento yokuba ngathi ukubona ukuba isihloko ibandakanywe database, nceda khona ngaphandle kuthi kwaye siza get in touch kunye ababhekisi phambili ukuze sibone ukuba singakwazi ukwenza yakho quanta a inyaniso.
Jonga abahlobo – akunyanzelekanga ukuba ufuna inkunkuma kakhulu kakhulu ixesha apha ecula le iindumiso ka-Patreon Omdala Imidlalo kwaye ndizixelela ukuba yonke into peachy. Endaweni yoko, mna, nento yokuba kakhulu ukhetha ukuba ngaba beza ukuze inciphe yi-ngokwakho, nto leyo iselwa lula ukwenza emva kokuba ujoyinela a free akhawunti kwaye namava ngokupheleleyo database kuba ngokwakho. Iinyaniso mba bamele ukuba oku exclusive kwaye inye indlela porn gaming sele kuba ubonile ukuba abe bakholelwa., Kengoko ukuvelisa into ngokwethu, kodwa thina ukupapasha ezinye eyona iinketho phandle phaya kwiindawo zentengiso ilungelo ngoku kwaye ngathi ayixhasi namnye nceda a esihogweni ka-ezininzi gamers ngokwenza njalo. Ngoku ke: ingaba ukulungele ukungena onzulu icala ukubona kuba ngokwakho yintoni kangaka malunga Patreon Omdala Imidlalo? Ngoko ke nceda, wenze njalo oku kakhulu ekhawulezileyo!